Farmaajo iyo Uhuru oo telefoon ku wada hadlay |
Farmaajo iyo Uhuru oo telefoon ku wada hadlay
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhiggiisa Kenya, Uhuru Kenyatta waxay ku wada hadleen khadka telefoonka sii loo xalliyo xiisadda ka dhex taagan labada dal, sida laga soo xigtay xafiiska warfaafinta ee aqalka madaxtooyada.
Waxay isku afgarteen in la sugo amniga xudduuda magaalooyinka Mandheera iyo Beled Xaawo.
“Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweyne Kenyatta ayaa adkeeyay in amniga labada dal uu yahay mid isku xiran, loona baahan yahay in laga fogaado wax walba oo keeni kara isfaham darro” ayaa lagu yiri war saxaafadeedka.
Waxay sidoo kale isku fahmeen in la sameeyo guddiyo ka kala socdo Soomaaliya iyo Kenya oo ka shaqeyn doono xallinta khilaafaadka.
Arrintan waxay imaaneysa xilli Kenya ay sheegtay in Soomaaliya ay kusoo xadgudubtay dhulka Kenya iyo madaxbannaanideedaba.
Kenya ayaa sheegtay in aysan wax jawaab ah ka bixinin ficilladaas ay ku eedeysay dowladda Soomaaliya, taas baddalkeedana “ay is xakameysay iyadoo eegeysa xiriirka soo jireenka ah ee dhaqanka iyo nabad ilaalinta ee u dhaxeeya labada dal”